Analytical + Creative = Yemagariro Media Kubudirira | Martech Zone
Analytical + Creative = Yemagariro Media Kubudirira
Muvhuro, April 20, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Ndeapi maitiro anotyaira budiriro mumasocial media? Sezvatiri kuramba tichikura kubasa, tiri kutsvaga tarenda uye tinoda musanganiswa wakakodzera.
Mwanakomana wangu anokudza masvomhu mudzidzi… uye muimbi. Mwanasikana wangu muimbi… uye masvomhu wiz. Ndiri kuongorora kwazvo… asi ndinoda kuve neunyanzvi mukunyora kwangu uye dhizaini. Mimhanzi zvirokwazvo kiyi yekubudirira kune vese mwanakomana wangu nemwanasikana. Ini handisi muimbi, asi zvekuzvivaraidza nazvo zvekugadzira zvandinoshanda pane zvakabatsira kubudirira kwangu. Ini ndinotenda kudzidzira zvekugadzira kunze kwebasa rako kunobatsira kana uchiongorora uye kugadzirisa matambudziko mune rako basa - pakupedzisira kunotungamira mukubudirira kwako.
Handifungi nezvangu se nyanzvi muSocial Media asi ini ndakave neruzivo rwakakwana mairi kubatsira kutungamira makambani kuburikidza nemumugodhi munda uye nekuvabatsira shandisa masvikiro anobatanidzwa. Anenge mazuva ese ini ndiri kushanda pane blog zvinyorwa, mharidzo, hurukuro, email magadzirirwo uye webhu dhizaini. Imwe yeiyi inguva yekugadzira kwandiri.
Dai ndaizofanira kuronga nguva yangu, iri ~ 50% yekugadzira uye ~ 50% zvine hungwaru / ongororo. Handina chokwadi chekuti ndinogona kunge ndiri utsanzi mune mhinduro dzandinoshanda nadzo nevatengi nevashandi pamwe neni dai ndisina imwe nzira yekubuda iyo yaida kuti ini ndiite zuva nezuva. Ndinotenda kuti ndinogara ndichipikiswa kuti ndiuye nesarudzo yekugadzira - kungave dhizaini yekushandisa kana mazwi kune anonakidza blog blog.
Sezvo ini ndichitarisa kune dzakawanda shamwari dzangu mubhizinesi dzakabudirira, vane zvivakwa zvakafanana zvekugadzira. Vazhinji vavo vanoita zvese kusimudzira uye graphical dhizaini. Vamwe vaimbi vamwe vafotori. Vashoma vatambi… asi kwete vatambi vakapusa, iwo machena machena emvura, vatambi vekunakidzwa kana vamhanyi vemarathon Handikwanise kufungidzira hunyanzvi hwahwo hunoda kugonesa muviri wako kupfuurira kuburikidza nematambudziko iwayo.
Ndinogara ndichishamisika kunzwa zvinoitwa neshamwari dzangu kunze kwavo basa. Vazhinji vanhu havasiyanise pakati peyakasika divi rebasa rangu uye iyo yekuongorora, asi chiri chokwadi chinhu chandakagona kupinza mairi. Ndinoziva kana ndiri kushandisa mhinduro kubva kune yega mhando yekufunga kubatsira kugadzirisa imwe uye ini ndinofanirwa kuzviita kazhinji. Zvinotora kugara uchidzidzira uye kugadzirisa zvakanaka.
99% yenguva, mune yangu ruzivo, iyo yakaoma chikamu nezve kugona kwekugadzira haisi kuuya nechimwe chinhu chisina akambofunga nezvacho kare. Chikamu chakaoma chiri kunyatso kuita chinhu chawakafunga nezvacho. Seth Godin
Ndingafarire vaverengi veichi posvo kuti vagovane yavo yekugadzira divi uye vanogona blog kana kutaura pamusoro pekuti zvinobudirira zvinokanganisa sei kugona kuita kwavo basa mabasa. Ndapota shandisai!
Super Crunchers naIan Ayres
Apr 20, 2009 pa 11: 58 PM
Pandakanga ndichangotanga basa rangu, ndaipedza mazuva angu ndichinyora uye nehunyanzvi hwekutungamira tsamba dzekutumira. Yakarurama-pfungwa. Zvino husiku, ndainyora dhatabhesi zvirongwa zvekuteedzera tsamba dzevatengi vangu vasingaite purofiti avo vaisakwanisa kutenga mapeji ekusimudza mari panguva iyoyo. Kunyanya kuruboshwe-brained.
Gare gare, pandakanga ndisinganyanyi kubatikana murutivi rwekugadzira rwemhinduro yakananga, mudzimai wangu neni takanyora pamwe chete katuni yepaneti imwe yebepanhau revhiki nevhiki (iyo Milwaukee vhezheni yeChicago's "The Reader," inodaidzwa kuti Milwaukee Weekly). Ndakaita zvese zvecartoon yacho.
Zvanga zvichifadza kuona kuti kakawanda sei ini ndinoedza kusanganisa marudzi ese ezviitwa. Ndicho chimwe chezvikonzero zvinoita kuti ndiite zvandinoita kuti ndirarame kunyangwe ndisina kupihwa mari yacho.
Ndatenda nekuunza iyi inonakidza musoro wenyaya (KWAINI zvirinani!). Ini ndinotarisira izvo zvinoita vamwe kukwenya zvese zvekugadzira uye zvekuongorora itches!
Apr 21, 2009 pa 10: 40 AM
"Ndaizoita zvandinoita kuti ndirarame kunyange kana ndisina kubhadharwa." - ndizvo zvinotaura zvose, Jeff! Ndinofunga kuti ndiri mumamiriro ezvinhu akafanana… kunyangwe ndaizofanira kuita chimwe chinhu kubhadhara mabhiri. 🙂
Apr 21, 2009 pa 8: 35 AM
Ini ndiri mugadziri wemifananidzo masikati, asi mumwedzi yaNdira-Kubvumbi, ndinotora basa rechipiri kuita mutero. Sezvo iwo maviri akasiyana zvakanyanya, ini handineti-kuneta sezvandingaita kechipiri chikamu chenguva yebasa ndichiita chimwe chinhu chakafanana nebasa rangu rezuva.
Pandinenge ndichigadzira chimwe chinhu, kushandisa mativi ese europi hwangu kunondibatsira kuti ndive zvese zvinoshanda uye kugadzira. Izvo zvakaitawo kuti ndive yakakosha muhofisi, ndinokwanisa kupa mazano anogona kubatsira nebhizinesi redu, asi ari mashoma kubva pane akajairwa kuti atipe muganho.
Apr 21, 2009 pa 10: 39 AM
Izvo zvinonakidza chaizvo - hongu nekodhi yedu yemutero, inofanirwa kutora yakati wandei yekugadzira (asi kwete yakawandisa!).
Apr 22, 2009 pa 9: 55 PM
Ndinoshanda nehunyanzvi, asi ndiri muimbi zvakare. Ndinofunga kukwanisa kuburitsa simba rangu remimhanzi kunobatsira kujekesa pfungwa dzangu uye kunoita kuti ndishande nemazvo.